पाँच तारे होटलमा चर्चित अभिनेत्रीले कोठी चलाएको पर्दाफास… – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/पाँच तारे होटलमा चर्चित अभिनेत्रीले कोठी चलाएको पर्दाफास…
काठमाडौं । को’रोना भाइ’रस (को’भिड–१९) पछि कलाकारिता क्षेत्रमा लागेका धेरै बेरोजगार भएका छन् । विश्वको सबैभन्दा ठुलो सिने उद्योग मानिएको बलिउडमा पनि धेरै जना बेरोजगार भएर आम्दानीका लागि २ नम्बरी बाटो रोज्न थालेका छन् ।
हालै, महाराष्ट्रको मुम्बई प्रहरीले यस्तै कार्यमा संलग्न कलाकारलाई समातेको छ । मुम्बईको उपनगर गोरेगाउँमा पाँच तारे होटेलमा कोठीको व्यापार भइरहेको पर्दाफास गरेको छ । यस घ’टनामा प्रहरीले एक बलिउड अभिनेत्री सहित तीन युवतीहरुलाई पक्रा’उ गरेको छ । प्रहरीले आरोपितको बि’रूद्ध भारतीय संहिता (आईपीसी) को व्यापार (रोकथाम) कानून अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
जानकारीका अनुसार क्राइम ब्रान्चको टोलीले शुक्रवार दिउँसो एउटा पाँच तारे होटेलमा छापा लिएको थियो । प्रहरी टोलीका सदस्यहरूलाई ग्राहकका रूपमा होटल पठाइएको थियो, जहाँ उनीहरूले यस्तो कार्यको डीलरहरूलाई भेटेका हुन् ।
यस पछि, प्रहरीले छापा लियो । महिलालाई घटनास्थल बाट उद्धार गरियो । प्रहरीले प’क्राउ गरेका तीन महिला मध्ये एक जना बलिउड चर्चित अभिनेत्री हुन् । उनीमाथि बलिउड र टिभी शोहरुमा काम गर्ने महिला कलाकारलाई ठूला होटेलहरुमा यस्तो व्यापारका लागि ल्याउने गरेको आ’रोप पनि लागेको छ ।
बलिउड चर्चित अभिनेत्री र डान्सरहरु पक्रा’उ परेको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ तर को हुन् भन्ने नाम खुलाएको छैन । मानवअधिकारको रक्षाका लागि उनीहरुको नाम गोप्य नै राखिने प्रहरीको दावी छ ।
”ज’स्तो सुकै बि’जी भ’ए पनि एक प’टक अव’श्य प’ढौ ! नपढे त’पाई’लाई प’छु’तो हु’नेछ” !
श्री’मती’लाई हो’टल’मा रं’गेहा’त फे’ला पा’रे सु’भाष’ले हे’नुहो’स् भिडियो